Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada tirtiray ka doonayay oo HTC
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada tirtiraa doonayay oo HTC
Browsing ee forums, waxaad ka heli doontaa in hal su'aal aad loo jecel yahay in wax badan oo ka mid ah milkiilaha casriga ah ayaa si joogta ah u codsaday yahay "aad dib u soo ceshano karo xiriirada tirtiray ka telefoonka gacanta". Casriga waxaan idin keenay badan oo faa'iidooyinka si aad u hadli kartaa saaxiibo meel kasta oo koox, sawiro qaado mar kasta oo aad rabto, akhriyaan buugaag xitaa baska, iwm Marka la soo koobo, waxaad samayn kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan go, kaas oo aad samayn karto oo kaliya fadhiya miiska ka hor inta computer aad.
Iyadoo la raacayo, dhibaatada yimaado. Tusaale ahaan, in forum HTC ah, dad badan oo ka caban in ay tahay mid aad u fudud in ay tirtirto xiriirada qaar ka mid ah si qalad ah ku shubtaan taleefanadooda la doonayay oo HTC marka ay isticmaalayso hawlaha qaar ka mid ah ma ay samayn aqoon u leh. Waa xanuun dhab ah. Waa maxay xanuun badan waa in aad ka heli doonaa qalab fara badan oo sheeganaya in ay badbaadiyaan karo xiriirada aad lumay phone doonayay oo HTC ah, laakiin waxay ku soo celin karaa oo keliya sawiro iyo videos aad, xiriirada ma at dhan.
Xaaladdan oo kale, dooro iyo soo qaado qalab ah soo kabashada wax ku ool ah waa kuwa caqliga leh. Xogta lumay waa mid aad u jilicsan. Qof kasta oo xog cusub u overwrite kartaa oo aad u unrecoverable. Marka ay timaado in la doonayay oo HTC qalab kabashada xiriirada lagu kalsoonaan karo oo waxtar leh, waxaad heli kartaa Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) rakibay on your computer. Waxaa ka shaqeeya weyn u doonayay oo HTC iyo dib u soo ceshano karaa tirtiray xiriirada, fariimaha, sawiro, videos, maqal ah iyo dukumantiyo in hab degdeg ah oo sahlan. Waxaad aan ka xumaan doonaan, haddii aadan ma dooran.
Download hoos ku version maxkamad si uu u siiyo isku day ah oo ah:
Tallaabada 1. Hubi aad telefoon iyo xerto
Ka hor inta aanad bilaabin, ka hubi in la doonayay oo HTC waa in hab debugging USB ama aan. Waa in haddii aad rabto in ay sii wadaan. Waxaad ku hubin kartaa sidan:
* Tubada Settings ku saabsan telefoonka.
* hoos u riixdaa oo guji fursadaha Developer .
* Markaas awood debugging USB ay u jarayso.
Ka dib markii uu xaqiijiyay in aad telefoonka waa in hab debugging USB, hadda waxa aad ku xidhan karto your computer. Markaas ordi barnaamijka aad hore u soo bixi, oo aad arki doonaa suuqa kala hoose.
Tallaabada 2. Sawirka aad telefoon
Sida ku cad suuqa kala, waxaad u baahan tahay in la hubiyo in batteriga ah ee aad taleefan ka badan tahay 20% eedeeyay. Markaas waxaad gujinaya karaa Start si ay u falanqeeyaan xogta ku saabsan HTC ugaar. Ka dib markii falanqaynta, waxaa laguu sheegi doonaa in ay jirto app la odhan jiray Superuser Codsiga dhisayaa ilaa aad telefoonka ee shaashadda guriga. Waxaad riix kartaa badhanka ogolow oo uu horay u socdo.
Tallaabada 3. Ladnaansho xiriirada lumay ee HTC ugaar
Marka habka scan dhamaado, waxaad eegi kartaa dhammaan xogta laga helay qaybaha. Dooro Xiriirada, ka dibna waxaad ka akhrisan kartaa content buuxda sida magacyadooda, shirkadaha, horyaal shaqo, telefoon lambarada iyo cinwaanada emailka. Waxaa jira xiriir tirtiray (baaba in orange) iyo xiriirada jira (baaba madow) ah ee aad taleefan HTC ugaar. Dooro waxyaabaha aad rabto in aad guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer sida .html, .csv iyo files .vcf.
Download version maxkamad free of Wondershare Dr.Fone for Android:
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Xiriirada ka HTC EVO 4G
Ultimate Guide ayaa si Manager Samsung Gear Fit
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga LG in Blackberry